နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အသံုးတဲ့မယ့္ Dictionary မ်ား စုစည္းမႈ
စဉ် အဘိဓာန်အမျိုးမျိုး Useful Link ဖော်ပြချက်
1 သက်ကတ + အငျ်ဂလိပျ အဘိဓာနျ (Sanskrit-English Dictionary) https://www.mediafire.com/?w9rigx6w0zg6ara
2 အာရဗီ-မွနျမာ အဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?ty865z2rzyc978j
3 A Dictionary English and Burmese By Adoniram Judson (1849) (First Edition) https://www.mediafire.com/?yx6b40t77aywfb3 ယုသဒနျရဲ့ အငျ်ဂလိပျ-မွနျမာ အဘိဓာနျကို ပထမအကွိမျ ဇနျနဝါရီ ၁၈၄၉ ခုနှဈမှာ စတငျပုံနှိပျထုတျဝခေဲ့ပါသညျ။ စာမကြျနှာ ၅၈၉ မကြျနှာ ပါရှိပွီး သူခတျေသူ့ကာလက သူ့အရငျထုတျဝခေဲ့တဲ့ ခြာလိနျးအဘိဓာနျနှငျ့ ဂြော့ဟောငျးအဘိဓာနျတှထေကျ အဘိဓာနျ ဟုခေါျဆိုမှတျယူနိုငျတဲ့ ပွညျ့စုံကောငျးမှနျလှတဲ့ အဘိဓာနျတဈအုပျဖွဈပါသညျ။ မောျလမွိုငျမွို့မှနေ ထုတျဝခေဲ့တာပါ
4 An English and Burman Vocabulary By George.H.Hough (1825) https://www.mediafire.com/?xc3b5pt3ct8x8jn ဂြော့ဟောငျးက ပထမဆုံး အငျ်ဂလိပျမွနျမာ စာလုံးဝေါဟာရ စာအုပျကို စတငျပွုစုခဲ့သူပါ။ သူရဲ့ ဝေါဟာရကမြျးဟာ အဘိဓာနျဖွဈဖို့ အဆငျ့မလုံလောကျသေးပမေယျ့လဲ ဒါဟာလဲ ကြှနျတောျစိတျထငျ မွနျမာလူမြိုးတှအေတှကျ ပထမဆုံးသော အငျ်ဂလိပျမွနျမာ ဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေး လမျးစတဈခုလို့တော့ ထငျပါတယျ။ စာမကြျနှာ ၄၂၄ မကြျနှာရှိပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံ စီရမျပိုလျ(Serampore)ကနေ ပုံနှိပျထုတျဝတောဖွဈပါတယျ
5 Anglo-Burmese dictionary by George.H.Hough (1845) (or) Digital General Collection https://www.mediafire.com/?v1s8rnx1zsxj8nm ဂြော့ဟောငျးဟာ ၁၈၄၅ ခုနှဈကွမှပဲ သူကိုယျတိုငျ သူ့စာအုပျကို အငျ်ဂလိုဘာမား အဘိဓာနျဆိုပွီး နာမညျတပျခဲ့သော အဘိဓာနျစာအုပျကို ထုတျဝခေဲ့ပါသညျ။ စာမကြျနှာ ၃၄၆ မကြျနှာရှိတဲ့ ဒီအဘိဓာနျကို မွနျမာနိုငျငံ မောျလမွိုငျကနေ ထုတျဝခေဲ့တာပါ
6 Burmah and the Burmese By Kenneth Robert Henderson Mackenzie (1853) https://www.mediafire.com/?n2ev4i16ehxo38d မွနျမာနှငျ့ မွနျမာလူမြိုးမြား စာအုပျကို Kenneth Robert Henderson Mackenzie ကရေးသားသညျ။ ၁၈၅၃ ခုနှဈတှငျ လနျဒနျမှ ပုံနှိပျထုတျဝသေညျ။ စာမကြျနှာ ၂၁၂ ပါရှိသညျ။ မွနျမာပွညျအကွောငျးကို အငျးဝလကျထကျမှ စပွီးဖောျပွထားသညျ
7 Burmese Pocket Dictionary By Adoniram Judson (1887) PDF မူရငျးနရော (or) Digital General Collection https://www.mediafire.com/?98q5dmwd08d8fyu မွနျမာပေါ့ကဒျ အဘိဓာနျစာအုပျကို ယုသဒနျရဲ့ အဘိဓာနျစာအုပျမှ မှီငွမျးကိုးကားထားပွီး အငျ်ဂလိပျမှ မွနျမာ ပွနျဆိုမှုကို F.D. Phinney,M.A ဆိုသူက ပွုစုပွီး မွနျမာမှ အငျ်ဂလိပျကို F.H. Eveleth ဆိုသူက ပွုစုထားတာဖွဈသညျ။ စာမကြျနှာ ၃၈၆ မကြျနှာပါရှိပွီး ၁၈၈၇ ဇနျနဝါရီမှာ ထုတျဝခေဲ့ပါသညျ
8 Easier English Basic Dictionary https://www.mediafire.com/?vkptpx734tbaqmv
9 Easier English Student Dictionary https://www.mediafire.com/?w7x8umzd8p6txhz
10 English to myanmar geology dictionary https://www.mediafire.com/?7rv0yjpo86zrey4
11 Grammatical notices of the Burmese language By Adoniram Judson (1842) https://www.mediafire.com/?kbb9eiv7jpkciuj ယုသဒနျက ၁၈၄၂ ခုနှဈမှာ မွနျမာသဒ်ဒါ ဆိုပွီး မွနျမာလူမြိုးတို့၏ မွနျမာစာ သဒ်ဒါကို အငျ်ဂလိပျလို ရှငျးဆိုခကြျမြားနဲ့ စာအုပျထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။ ဒီစာအုပျတှငျ စာမကြျနှာ ရ၆ မကြျနှာပါရှိပွီး ၁၈၄၂ ခု ဂြူလိုငျလတှငျ မောျလမွိုငျကနေ ထုတျဝခေဲ့တာပါ။ အဘိဓာနျ မဟုတျပမေယျ့လဲ လေ့လာကောငျးမယျ့ စာအုပျတဈအုပျပါ
12 Vocabulary and phrase book in English and Burmese, by Cephas Bennett (1886) https://www.mediafire.com/?tiwb7m58wntlw15 အငျ်ဂလိပျ - မွနျမာ စာလုံးဝေါဟာရ နှငျ့ ဘာသာစကားပွောစာအုပျကို Rev.C.Bennett က ပွုစုခဲ့သညျ။ တတိယအကွိမျထုတျဝခွေငျးတှငျ M.H.Eveleth က စိစဈတညျဖွတျပေးထားသညျ။ ရနျကုနျမှ ၁၈၈၆ ခုနှဈတှငျ ပုံနှိပျထုတျဝခေဲ့သညျ။ စာမကြျနှာ ၁၅၇ မကြျနှာပါရှိသညျ
13 ကလေးမြားအတှကျ အငျ်ဂလိပျ မွနျမာပုံပွ အဘိဓာနျ(၁) https://www.mediafire.com/?cd2noanszmqf8mz
14 ကလေးမြားအတှကျ အငျ်ဂလိပျ မွနျမာပုံပွ အဘိဓာနျ(၂) https://www.mediafire.com/?138csdpq8u6l5l4
15 စကားလုံးပုံသဏ်ဍာနျအဘိဓာနျ - သငျးသငျးနိုငျ https://www.mediafire.com/?ona79xdw1ptwoaf
16 မွနျမာ အငျ်ဂလိပျ ရုပျပွအဘိဓာနျ (၁) https://www.mediafire.com/?h815k76wz86f3i5
17 မွနျမာ အငျ်ဂလိပျ ရုပျပွအဘိဓာနျ (၂) https://www.mediafire.com/?18ekdijp5uwyeis
18 မွနျမာ အငျ်ဂလိပျ ရုပျပွအဘိဓာနျ (၃) https://www.mediafire.com/?71c52q8hx2674z2
19 မွနျမာ အငျ်ဂလိပျ ရုပျပွအဘိဓာနျ (၄) https://www.mediafire.com/?kj4nsccyw0melyc
20 ဦးဟုတျစိနျ - မွနျမာ-အငျ်ဂလိပျ-ပါဠိ အဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?939vrh132x8otiy ပွုစုရေးသားသူကတော့ ဦးဟုတျစိနျဖွဈပွီး ၁၉၈၁ မှာ ရိုကျနှိပျထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။ ဦးဟုတျစိနျဟာ ဘီအေ (ဂုဏျထူး)၊ ဘီအယျလျ ဘှဲ့ထူးမြားကို ရရှိထားတဲ့ ခတျေပညာတတျ ပုဂ်ဂိုလျကွီးတဈယောကျပါပဲ။ ဒီစာအုပျကို ပွုစုဖို့ နှဈ ၃၀ ကွာ ရငျးနှီးခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ထုတျဝသေူကလညျး သူကိုယျတိုငျပါပဲ။ မဉ်ဇူသကစာပကေ ရိုကျနှိပျထုတျဝပေါတယျ
21 ဦးဟုတျစိနျ (ပါဠိ - မွနျမာ အဘိဓာနျ) https://www.mediafire.com/?2wxsheomb47nmcx
22 မွနျမာ - ပွငျသဈအဘိဓာနျ(2004) မူရငျးနရော https://www.mediafire.com/?ofdjk5la2027u79 မွနျမာ ပွငျသဈ အဘိဓာနျစာအုပျတှငျ စကားလုံး ၆၅၀၀ ခနျ့ပါရှိပွီး ပွုစုသူမှာအရှငျဓမ်မသာမိ ဖွဈသညျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ ထုတျဝပေါသညျ။
23 မှနျစာ အဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?vwfv92ovqpujfn6
24 မွနျမာစာလုံးပေါငျး သတျပုံကမြျး (ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊ မွနျမာစာအဖှဲ့ ) https://www.mediafire.com/?98phe72ogj6xp1v
25 ထိုငျး + မွနျမာ အဘိဓါနျ https://www.mediafire.com/?63pii3x33almxsb
26 ခရီးဆောငျမွနျမာ အဘိဓာနျ (ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊ မွနျမာစာအဖှဲ့ ) https://www.mediafire.com/?u5nngsr9ln4a3un
27 အငျ်ဂလိပျ မွနျမာ ခရီးဆောငျ အဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?8qyr3f77f8n8qjt ဦးဆနျးလှငျ(အရှငျအာဒိစ်စရံသီ) ရေးသားပွုစုထားတဲ့2in 1 Travellers မွနျမာ - အငျ်ဂလိပျ - မွနျမာ အဘိဓာနျစာအုပျဖွဈပါတယျ။ စာရေးသူအဆိုအရ မွနျမာစာ မွနျမာစကားလို လေ့လာလိုတဲ့ နိုငျငံခွားသားမြား အတှကျ ရေးသားပွုစုထားတဲ့ စာအုပျဖွဈပါတယျ။ မွနျမာစာလို့သာ ပွောရတယျ။ တကယျရေးသား ထားတာတှကေ မွနျမာအသံထှကျ အငျ်ဂလိပျစာ Burglish တှနေဲ့ပါ
28 Dictionary of agriculture https://www.mediafire.com/?w6b7z64c21bh3y3
29 Dictionary of Aviation https://www.mediafire.com/?ewm2fy1c43nyedc
30 Dictionary of computing https://www.mediafire.com/?6sa58o85f92imqi
31 Dictionary of economics https://www.mediafire.com/?3gwlo15l5dkqgyv
32 Routledge Dictionary of Economics https://www.mediafire.com/?nnhqk4ymurx24iy
33 Dictionary of Accounting https://www.mediafire.com/?7v3mrjncud0sd0j
34 Dictionary of banking and finance https://www.mediafire.com/?z1fx6ic59fh7su9
35 Dictionary of Financial and Business Terms https://www.mediafire.com/?959xmo4lodo5qdq
36 Dictionary of food science and nutrition https://www.mediafire.com/?zdnz367bsd763lk
37 Dictionary of Politics and Government https://www.mediafire.com/?ex21euw76yqj1g9
38 ပွဈမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ အဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?nl0yxrjilr23zez ပဈမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (ရာဇသတျကွီး) ပုဒျမမြား နှငျ့ပတျသတျသော အကွောငျးအရာမြားကို လေ့လာလိုကျစားသူတှအေတှကျ အသုံးဝငျနိုငျတဲ့ ပွဈမှုဆိုငျရာ ဥပဒအေဘိဓာနျ နောကျတဈအုပျပါ။ ဦးကြောျဇယြေ ရေးသားပွုစု ထုတျဝထေားတာပါ။
39 ဥပဒရေေးရာ ဝေါဟာရအဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?lxmzghpuyr4u8cu ဥပဒနှေငျ့ပတျသတျသော စကားလုံးမြားကို လေ့လာလိုကျစားသူတှအေတှကျ အသုံးဝငျနိုငျတဲ့ အငျ်ဂလိပျ - မွနျမာ ဥပဒအေဘိဓာနျပါ။ ဦးကြောျဇယြေ ရေးသားပွုစုထားပွီး စဈသညျတောျစာပမှေ ထုတျဝထေားတာပါ။
40 Dictionary of Leisure, Travel and Tourism https://www.mediafire.com/?vh3wouc5nmbn1bb
41 Dictionary of media studies https://www.mediafire.com/?zulala29ah9ygc6
42 Dictionary of medical terms https://www.mediafire.com/?edan4scx4z0r057
43 Dictionary of nursing https://www.mediafire.com/?bmwk9sfaj84h542
44 ဆေးဝါပငျမြားအဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?h4dcmml3iec5q5f
45 Dictionary of Military Terms https://www.mediafire.com/?jym03pgb2z82w2f
46 သုတသေနသရုပျပွ ဘာသာရေး အဘိဓာနျ https://www.mediafire.com/?l2m72he0lkjn97i ဖြာပုံတိုကျသဈဆရာတောျ အဂ်ဂမဟာပဏ်ဍိတ အရှငျသွဘာသာဘိဝံသ ရေးသားစီရငျသညျ။ ၂၀၀၂ ခုနှဈတှငျ သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ တတိယအကွိမျထုတျဝသေညျ။၂၀၀၇တှငျ တဈကွိမျ၊ ၂၀၀၉ ခုနှဈတှငျ တဈကွိမျ ပွငျဆငျဖွညျ့စှကျပွီး PDF စာအုပျအဖွဈ ဦးဖွူဝငျးမှ ထုတျဝသေညျ။ ဗုဒ်ဓစာပမြေားကို အခွပွေုထားပွီး အတောျပွညျ့စုံသညျ့ မွနျမာလူမြိုးမြား ဖတျရှုလေ့လာသငျ့သညျ့ အဘိဓာနျစာအုပျဖွဈသညျ
47 သုတသေနအဘိဓာနျမြားမှတျစု - ဒေါကျတာရီရီ https://www.mediafire.com/?vlb3av4txilalg4
48 Dictionary of Sports Science https://www.mediafire.com/?7boy1bb1ot7y5as
49 ပညာရပျဝေါဟာရမြား https://www.mediafire.com/?7vqckth5jpjo2cr
စဥ္ အဘိဓာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး Useful Link ေဖာ္ျပခ်က္
1 သက္ကတ + အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် (Sanskrit-English Dictionary) https://www.mediafire.com/?w9rigx6w0zg6ara
2 အာရဗီ-မြန်မာ အဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?ty865z2rzyc978j
3 A Dictionary English and Burmese By Adoniram Judson (1849) (First Edition) https://www.mediafire.com/?yx6b40t77aywfb3 ယုသဒန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို ပထမအကြိမ် ဇန်နဝါရီ ၁၈၄၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာမျက်နှာ ၅၈၉ မျက်နှာ ပါရှိပြီး သူခေတ်သူ့ကာလက သူ့အရင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ချာလိန်းအဘိဓာန်နှင့် ဂျော့ဟောင်းအဘိဓာန်တွေထက် အဘိဓာန် ဟုခေါ်ဆိုမှတ်ယူနိုင်တဲ့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လှတဲ့ အဘိဓာန်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မော်လမြိုင်မြို့မှနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ
4 An English and Burman Vocabulary By George.H.Hough (1825) https://www.mediafire.com/?xc3b5pt3ct8x8jn ဂျော့ဟောင်းက ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ စာအုပ်ကို စတင်ပြုစုခဲ့သူပါ။ သူရဲ့ ဝေါဟာရကျမ်းဟာ အဘိဓာန်ဖြစ်ဖို့ အဆင့်မလုံလောက်သေးပေမယ့်လဲ ဒါဟာလဲ ကျွန်တော်စိတ်ထင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ပထမဆုံးသော အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး လမ်းစတစ်ခုလို့တော့ ထင်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၄၂၄ မျက်နှာရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီရမ်ပိုလ်(Serampore)ကနေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်
5 Anglo-Burmese dictionary by George.H.Hough (1845) (or) Digital General Collection https://www.mediafire.com/?v1s8rnx1zsxj8nm ဂျော့ဟောင်းဟာ ၁၈၄၅ ခုနှစ်ကြမှပဲ သူကိုယ်တိုင် သူ့စာအုပ်ကို အင်္ဂလိုဘာမား အဘိဓာန်ဆိုပြီး နာမည်တပ်ခဲ့သော အဘိဓာန်စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာမျက်နှာ ၃၄၆ မျက်နှာရှိတဲ့ ဒီအဘိဓာန်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မော်လမြိုင်ကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ
6 Burmah and the Burmese By Kenneth Robert Henderson Mackenzie (1853) https://www.mediafire.com/?n2ev4i16ehxo38d မြန်မာနှင့် မြန်မာလူမျိုးများ စာအုပ်ကို Kenneth Robert Henderson Mackenzie ကရေးသားသည်။ ၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာမျက်နှာ ၂၁၂ ပါရှိသည်။ မြန်မာပြည်အကြောင်းကို အင်းဝလက်ထက်မှ စပြီးဖော်ပြထားသည်
7 Burmese Pocket Dictionary By Adoniram Judson (1887) PDF မူရင်းနေရာ (or) Digital General Collection https://www.mediafire.com/?98q5dmwd08d8fyu မြန်မာပေါ့ကဒ် အဘိဓာန်စာအုပ်ကို ယုသဒန်ရဲ့ အဘိဓာန်စာအုပ်မှ မှီငြမ်းကိုးကားထားပြီး အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ ပြန်ဆိုမှုကို F.D. Phinney,M.A ဆိုသူက ပြုစုပြီး မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်ကို F.H. Eveleth ဆိုသူက ပြုစုထားတာဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ ၃၈၆ မျက်နှာပါရှိပြီး ၁၈၈၇ ဇန်နဝါရီမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
11 Grammatical notices of the Burmese language By Adoniram Judson (1842) https://www.mediafire.com/?kbb9eiv7jpkciuj ယုသဒန်က ၁၈၄၂ ခုနှစ်မှာ မြန်မာသဒ္ဒါ ဆိုပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့၏ မြန်မာစာ သဒ္ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းဆိုချက်များနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ ရ၆ မျက်နှာပါရှိပြီး ၁၈၄၂ ခု ဂျူလိုင်လတွင် မော်လမြိုင်ကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ အဘိဓာန် မဟုတ်ပေမယ့်လဲ လေ့လာကောင်းမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ
12 Vocabulary and phrase book in English and Burmese, by Cephas Bennett (1886) https://www.mediafire.com/?tiwb7m58wntlw15 အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ နှင့် ဘာသာစကားပြောစာအုပ်ကို Rev.C.Bennett က ပြုစုခဲ့သည်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းတွင် M.H.Eveleth က စိစစ်တည်ဖြတ်ပေးထားသည်။ ရန်ကုန်မှ ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ၁၅၇ မျက်နှာပါရှိသည်
13 ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ် မြန်မာပုံပြ အဘိဓာန်(၁) https://www.mediafire.com/?cd2noanszmqf8mz
14 ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ် မြန်မာပုံပြ အဘိဓာန်(၂) https://www.mediafire.com/?138csdpq8u6l5l4
15 စကားလုံးပုံသဏ္ဍာန်အဘိဓာန် - သင်းသင်းနိုင် https://www.mediafire.com/?ona79xdw1ptwoaf
16 မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၁) https://www.mediafire.com/?h815k76wz86f3i5
17 မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၂) https://www.mediafire.com/?18ekdijp5uwyeis
18 မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၃) https://www.mediafire.com/?71c52q8hx2674z2
19 မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ပြအဘိဓာန် (၄) https://www.mediafire.com/?kj4nsccyw0melyc
20 ဦးဟုတ်စိန် - မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?939vrh132x8otiy ပြုစုရေးသားသူကတော့ ဦးဟုတ်စိန်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၁ မှာ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဦးဟုတ်စိန်ဟာ ဘီအေ (ဂုဏ်ထူး)၊ ဘီအယ်လ် ဘွဲ့ထူးများကို ရရှိထားတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒီစာအုပ်ကို ပြုစုဖို့ နှစ် ၃၀ ကြာ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူကလည်း သူကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ မဉ္ဇူသကစာပေက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတယ်
21 ဦးဟုတ်စိန် (ပါဠိ - မြန်မာ အဘိဓာန်) https://www.mediafire.com/?2wxsheomb47nmcx
22 မြန်မာ - ပြင်သစ်အဘိဓာန်(2004) မူရင်းနေရာ https://www.mediafire.com/?ofdjk5la2027u79 မြန်မာ ပြင်သစ် အဘိဓာန်စာအုပ်တွင် စကားလုံး ၆၅၀၀ ခန့်ပါရှိပြီး ပြုစုသူမှာအရှင်ဓမ္မသာမိ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေပါသည်။
23 မွန်စာ အဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?vwfv92ovqpujfn6
24 မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း (ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ ) https://www.mediafire.com/?98phe72ogj6xp1v
25 ထိုင်း + မြန်မာ အဘိဓါန် https://www.mediafire.com/?63pii3x33almxsb
26 ခရီးဆောင်မြန်မာ အဘိဓာန် (ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ ) https://www.mediafire.com/?u5nngsr9ln4a3un
27 အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ခရီးဆောင် အဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?8qyr3f77f8n8qjt ဦးဆန်းလွင်(အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ရေးသားပြုစုထားတဲ့2in 1 Travellers မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအဆိုအရ မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို လေ့လာလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာလို့သာ ပြောရတယ်။ တကယ်ရေးသား ထားတာတွေက မြန်မာအသံထွက် အင်္ဂလိပ်စာ Burglish တွေနဲ့ပါ
38 ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ အဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?nl0yxrjilr23zez ပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ရာဇသတ်ကြီး) ပုဒ်မများ နှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအဘိဓာန် နောက်တစ်အုပ်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစု ထုတ်ဝေထားတာပါ။
39 ဥပဒေရေးရာ ဝေါဟာရအဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?lxmzghpuyr4u8cu ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်သော စကားလုံးများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဥပဒေအဘိဓာန်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစုထားပြီး စစ်သည်တော်စာပေမှ ထုတ်ဝေထားတာပါ။
44 ဆေးဝါပင်များအဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?h4dcmml3iec5q5f
46 သုတေသနသရုပ်ပြ ဘာသာရေး အဘိဓာန် https://www.mediafire.com/?l2m72he0lkjn97i ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်သြဘာသာဘိဝံသ ရေးသားစီရင်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။၂၀၀၇တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး PDF စာအုပ်အဖြစ် ဦးဖြူဝင်းမှ ထုတ်ဝေသည်။ ဗုဒ္ဓစာပေများကို အခြေပြုထားပြီး အတော်ပြည့်စုံသည့် မြန်မာလူမျိုးများ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သည့် အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်သည်
47 သုတေသနအဘိဓာန်များမှတ်စု - ဒေါက်တာရီရီ https://www.mediafire.com/?vlb3av4txilalg4
49 ပညာရပ်ဝေါဟာရများ https://www.mediafire.com/?7vqckth5jpjo2cr
Read times Last modified on Tuesday, 28 July 2020 17:51